एक व्यक्तिको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट ४ जनाको मृत्यु — onlinedabali.com
एक व्यक्तिको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट ४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको नर्दन टेरिटोरी राज्यको राजधानी डार्बिनमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बन्दुकधारीले सटगन लिएर जथाभावी गोली प्रहार गर्दा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । गोली प्रहारबाट कम्तिमा ४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
स्थानीय समाचारमाध्यमका अनुसार एक व्यक्तिले सटगनबाट जथाभावी गोली प्रहार गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले सहरमा सुरक्षा सर्तकता अपनाएको थियो । डार्बिनको भित्री क्षेत्र वुल्नरमा कैयौं गोलीको आवाज सुनिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार बन्दुकधारीले डार्बिनको एक होटलको प्रत्येक कोठामा पसेर जथाभावी गोली प्रहार गरेका थिए । अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनका अनुसार आक्रमणकारीले पाल्मस होटलमा रहेकी एक महिलाको गोडामा कयौं पटक गोली हानेका थिए ।
घटनामा एक ब्यक्तिको मात्र संलग्नता रहेको हुन सक्ने बताइएको छ । घटना भएको एक घण्टापछि नै ४५ वर्षिय आक्रमणकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । तर पक्राउ परेका व्यक्तिका बारेमा विस्तृत जानकारी दिइएको छैन ।
प्रहरीका अनुसार बन्दुकधारीले टोयोटाको सेतो हाइलक्स गाडी चलाएर आएका थिए । यसैबीच अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले घटना आतंकवादी क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नरहेको बताएका छन् ।
उत्तर कोरियाद्वारा पनडुब्बीबाट मार हान्ने नयाँ क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण
उत्तर कोरियाद्वारा आणविक क्षेप्यास्त्र प्रहार, कहाँ खस्याे ?
ताइवान शान्तिपूर्ण रुपमा एकीकरण हुन तयार नभए बल प्रयोगः सी
अन्तरिक्षमा पहिलो पटक पुगेको रुसले नै पहिलो चलचित्र छायांकन गर्यो, अमेरिकाभन्दा फेरि पनि अगाडि
चीनलाई ताइवानकी राष्ट्रपतिको अहिलेसम्मकै ठूलो धम्की, जवाफ फर्काउने तयारीमा चीन
कात्तिके झरीः बाढी-पहिरोमा परी ४८ जनाको ज्यान गयो, ३१ जना हराए
पश्चिमी वायु पूर्व सर्‍यो, बागमती, १ र २ प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
दुहबी सबस्टेसन डुवानमा परेपछि १ नं. प्रदेश अन्धकार, के भन्छन् कुलमान ?